February 2010 ~ brazesh
February 27, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
यो एउटा बहुआयामिक र विशाल रंगमञ्चको दृश्य हो, जहाँ विभिन्न कुनामा एकसाथ विभिन्न दृश्यहरू चलिरहेका हुन्छन् । अहिले यहाँ दुईवटा दृश्यहरू विशेष रूपमा उल्लेखनीय छन् । एउटा कुनामा एक जना नेताको विदेशमा भएको उपचारको विशाल धनराशिको खर्च फस्र्यौट गर्नका लागि कसरत भइरहेको देखिन्छ । डेढ करोड रुपियाँको विवादास्पद खर्च भुक्तानीका लागि परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका बीच पौँठेजोरी चलिरहेको छ । रंगमञ्चको अर्को कुनामा रुकुमको जर्जर आर्थिक अवस्था भएको एक आमनागरकि, जो सम्भवतः डेढ करोडमा कतिवटा शून्य हुन्छ भनेर गन्न पनि सक्तैन, आफ्नी छोरीको उपचार गर्न नसकेका कारण सपरविार आत्महत्या गर्छ ।
हाम्रो देशमा नाटकको उल्लेख्य विकास हुन सकेन भन्ने कुरा बेलाबेला त्यसका पारखीहरूले गर्ने गरेको सुनिन्छ । त्यसका लागि भनेर खटाइएका संघसंस्थाहरूले पनि खासै केही गरेनन् भनेर नाट्यविद् र दर्शकहरूले चित्त दुखाएको सुनिएको छ । हुन पनि हो, केही व्यक्तिगततर्फबाट भइरहेका प्रयासहरूबाहेक अन्य कतैबाट नाटक जोगाउन र फैलाउन केही भएजस्तो लाग्दैन । मनोरञ्जनका अन्य तरकिाहरूमा हजारौँ विकल्प पाउने मान्छेले नाटक हेर्नका लागि कुनै विकल्प पाउँदैन । त्यसैले नाटक र नाटकका कलाकारहरूले पाउनुपर्ने ख्याति र लोकपि्रयता पाउन नसकेको भान हुन्छ । त्यसैले नाटकमा लाग्नेहरूले अपवाद छोडेर त्यसैबाट ज्यूज्यान पाल्न सक्दैनन् भन्ने साधारण मानिसको सोचाइ हुन्छ ।
तर, गहिरएिर सोच्ने हो भने विश्वमा नै सायद हामीकहाँजति नाटकको विकास भएको होला । अनि, नेपालमा नाटक गर्नेहरूले जति मानसम्मान र द्रव्य अरू मुलुकमा विरलै कमाएका उदाहरण पाइएलान् । यहाँजति राष्ट्रियस्तरमा नाटकका लागि सोचिएको र कार्य गरएिको, नाटकका लागि भनेर राज्यको ढुकुटी रत्ियाइएको पनि अन्त कतै छैन होला । त्यसको मञ्चन कुनै सानो रंगमञ्चमा नभई बृहत् ढंगले राष्ट्रव्यापी रूपमा हुने गर्छ । यो नाटकले अरू पनि विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ । यो सम्भवतः सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको नाटक पनि हो । त्यति मात्र होइन, यसका अरू विशेषताहरू त गनेर साध्य नै छैनन् । लामो समयको साथसाथै, निरन्तरतामा पनि यसको दाँजो कसैले गर्न सक्दैन । बिनाकुनै विश्राम यो नाटक चलेको छ । यसलाई सर्वाधिक दर्शकले एकैसाथ हेरेको नाटक हुने गौरव पनि प्राप्त छ । दर्शकहरू युगौँदेखि यो नाटक हेरेर अघाएका छैनन् । अनि, यस नाटकका अभिनेताहरूले अकूत सम्पत्ति र शक्ति पनि हासिल गरेका छन् । परचियको हिसाबले भन्ने हो भने यिनले जति सञ्चारमाध्यममा ठाउँ कसैले पाएका छैनन् । नाम र दुर्नामको कुरा नगर्ने हो भने यिनीहरूको जति चर्चापरचिर्चा अरू कसैको हुँदैन पनि । यिनले आफ्ना सात पुस्ता सुधारसिकेका छन् । यिनीहरू करोडौँका गाडी चढेर हिँड्छन्, महँगा होटलहरूमा खान्छन्, अघिपछि लावालस्कर र सुरक्षा लिएर हिँड्छन् ।
हरेक साल दसैँका बेला रामलीला हेरेर पनि मान्छेहरू फेर िअर्को रामलीला त्यति नै चाख मानेर हेरेजस्तो छ यसको पुनरावृत्ति पनि । तर, यो नाटकमा रामायणको आदर्श, त्याग र तपस्याको कुराचाहिँ हेर्न पाइँदैन । यसमा हेर्न पाइन्छ, महाभारतको जस्तो रणनीति, छलकपट, धोका र विश्वासघात । बेलाबेला पात्रहरू परविर्तन हुन्छन्, नयाँ लुगा लगाउँछन्, कहिले मुकुट लगाउँछन्, कहिले मुकुट फुकाल्छन् तर कथा त्यही हुन्छ । लुगा फेरेर आएका कलाकारहरूको कुरा फेरँिदैन । कुरा फेरएिर आउनेहरूको काम फेरँिदैन । बहुआयामिक र विशाल रंगमञ्चमा एकैसाथ थुप्रै कुनाकुनामा थरीथरीका दृश्यहरू चलिरहेका हुन्छन् यस नाटकमा ।
यसका लेखक र निर्देशकहरू अरू नाटकमा जस्तै पर्दापछाडि कतै लुकेका हुन्छन् । अभिनेताहरू तिनले तोकेको भूमिका र लेखेका संवादहरू न्वारानदेखिको बल निकालेर जीवन्त बनाउने प्रयास गररिहेका हुन्छन् । ती कलाकारहरू तिनलाई खुसी बनाउने क्रममा दर्शकलाई त्यो कुरा मन परेको छ कि छैन वा उनीहरूले हेर्न खोजेको कुरा त्यो हो कि होइन भनेर सोच्न पनि सोच्दैनन् । लेखक र निर्देशकले पनि यस्तो कुनै छुट अभिनेताहरूलाई दिएका छैनन् । यी अभिनेताहरूको बाध्यता र दर्शकहरूको विडम्बना भनेको नै त्यही हो । बेलाबेला त यिनीहरूका हातखुट्टा र टाउकोमा दर्शकहरूले नदेख्ने डोरी बाँधेर पर्दापछाडि बसेर निर्देशकले यिनीहरूलाई कठपुतली बनाएर पनि नचाउँछन् । भूमिका मन नपरेर विरोध गर्ने अभिनेताहरूको त जहाँ पनि, जुनै पनि नाटकमा रोल काटेर पठाइदिने चलन नै हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै रोल काट्ने चलन छ । समानता र भिन्नताहरू हुँदाहुँदै पनि अकाट्य कुरा के हो भने यो नाटक सदियौँदेखि चलिरहेको छ र आउँदो सदियौँसम्म पनि चली नै रहने लक्षण छ ।
हामी यो नाटकलाई राजनीति भन्ने गर्छौं र यसका अभिनेताहरूलाई नेता भन्छौँ । त्यसै पनि खासै फरक छैन यी दुईमा । अभिनेता बाँच्नका लागि अभिनय गर्छ, नेता अभिनय गर्नका लागि बाँच्छ ।
February 14, 2010 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
सबै कुरा राजनीतीकरण भएको छ । हरेक मान्छे आक्रामक र स्वयंमा असुरक्षित छ । विपरीत दिशामा आएका दुईवटा सवारी साधनमा कसले बाटो छोड्ने भन्ने कुरामा पिटापिट हुनु साधारण कुरा भएको छ हिजोआज । बाटोमा निर्माण सामग्री राख्ने नराख्नेजस्ता साधारण विषयको विवादमा समेत गोली चल्न थालेको छ । आदिम युगमा हिंस्रक जनावरहरूसँग मात्र असुरक्षित हुन्थ्यो मान्छे तर आजकल मान्छेसँगै डराउन थालेको छ मान्छे । यति हुँदाहुँदै पनि हामी आश्वस्त छौँ, आशावादी छौँ किनभने हामीलाई आश्वासन दिइएको छ । हाम्रा नेताहरू र देश हाँक्ने चालकहरूले हरेक दिन हामीलाई आश्वासन दिने गरेका छन्, सब ठीक हुन्छ ।
प्रख्यात भारतीय लेखक शरद जोशीको एउटा पुरानो लेखको सम्झना यतिखेर सान्दर्भिक छ । भोपाल सहरमा एक दिनका लागि घुम्न आएका देवदूतहरूले देखेका कुराहरूलाई रोचक र काल्पनिक ढंगमा प्रस्तुत गर्दा उनले लेखेको एउटा प्रसंग छ । चुनाव र राजनीतिक प्रचारप्रसारको चुलीमा ती देवदूतहरू भोपाल आइपुगेका हुन्छन् । एक जना नेताले उनीहरू देवदूत हुन् भन्ने थाहा पाएर सहयोगका लागि याचना गर्छ । उसले आफ्ना मतदाताहरूलाई सहरको छेउबाट नदी बगाइदिने वाचा गरेको हुन्छ । देवदूतहरूले नयाँ नदी बनाइदिऊन् भन्ने उसले अपेक्षा राख्छ । देवदूत भन्छन्, "नदीनाला त प्राकृतिक कुराहरू हुन् । तिमीले यस्तो वाचा किन गरेको ?" स्वयं ईश्वरले पनि यस्तो आश्वासन दिन सक्दैनन् । प्रत्युत्तरमा नेता भन्छ, "ईश्वरलाई चुनाव लड्नु छैन नि त !"
हो पनि । झूटो वाचा, बकम्फुसे आश्वासन र असम्भव सपनाको खेती त तिनले गर्छन्, जसलाई चुनाव लड्नु छ । जसरी भए पनि कुर्सी हत्याउनु छ । लाखौँ मान्छेलाई कुहिराको काग बनाएर सत्तासीन हुनु छ । अहिले हामीलाई पनि हाम्रो थाप्लोमा टेकेर सत्ताको नाच नाच्ने कुर्सीपिपासुहरूले यस्तै सपनाहरू देखाएका छन्, यस्तै आश्वासनहरू दिएका छन् । हामीलाई उनीहरूले केही न केही आश्वासन दिएका छन् । त्यसैले, हामी ढुक्क छौँ । हामी वास्तवमै आश्वस्त छौँ ।
आजको मात्र कुरा होइन, यो त हामीले परापूर्वकालदेखि नै भोगेर आएको नियति हो । त्यसैले, हामी आश्वासनको अम्मली बनिसेकका छौँ । त्यो कुरा राम्ररी बुझेका हुनाले नै हामीलाई हाम्रा नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, हाकिम, सबैले निकै पहिलेदेखि नै थरीथरी आश्वासनहरू दिने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा शान्तिसुरक्षा कायम हुनेमा हामी आश्वस्त छौँ, मेलम्चीको पानी आउनेमा हामी आश्वस्त छौँ, जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने र लोडसेडिङ् हट्नेमा हामी आश्वस्त छौँ । काठमाडौँकेन्दि्रत विकास गाउँगाउँमा पुगेर सिंगो देशको विकास हुनेमा हामी आश्वस्त छौँ, अव्यवस्िथत सहरीकरण नियन्त्रण हुनेमा आश्वस्त छौँ । शिक्षाको गुणस्तर बढ्नेमा आश्वस्त छौँ । खेलकुदको विकास हुनेमा आश्वस्त छौँ । भ्रष्टाचार र महंगी नियन्त्रण हुुनेमा पनि हामी आश्वस्त छाँै । बहुलट्ठीसँग बढेका घरजग्गाको भाउ नियन्त्रण हुने र आर्थिक विकासको कुरामा समेत हामी आश्वस्त छौँ । सबैभन्दा ठूलो कुरा नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ नेपाल बन्नेमा पनि हामी आश्वस्त छौँ । नयाँ नेपाल बनेपछि हाम्रो मानसिकता पनि नयाँ बन्छ, आनीबानीहरू नयाँ बन्छन् र हाम्रा सारा समस्याहरू छुमन्तर भएर जानेछन् भन्नेमा हामी आश्वस्त छौँ ।
केही दिनअघि राजधानीमा अराजकता र असुरक्षाको एउटा अर्को नांगो ताण्डव देखियो । सुरक्षा व्यवस्थाको उपहास गर्दै अघिल्लो साता एउटा जघन्य हत्याकाण्ड भयो । अनि, त्यसपछि पनि यस्तै आश्वासनका लहरहरू उर्लेर आएका छन् । मृतकको घरमै पुगेर प्रधानमन्त्रीले दोषी पत्ता लगाएर कडा कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले पनि अपराधीहरूलाई तुरुन्त पक्रने आश्वासन दिएका छन् । चारवटा त भिन्दाभिन्दै छानबिन समिति नै बनेका छन् । अब हामी आश्वस्त नहुन सक्दैनौँ । हामीसँग त्यसको विकल्प पनि छैन । तर, नियालेर हेर्ने हो भने आजसम्म हामीले पाएका आश्वासनहरू कति पूरा भएका छन् ? पूरा नभएका आश्वासनका लागि आजसम्म कसले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन् ? फलानोफलानो बेला, फलानोफलानो कुरामा, फलानोफलानो आश्वासन दिइएकामा त्यो किन पूरा भएन भनेर कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने हामीलाई अधिकार छ कि छैन ? कथंकदाचित कसैले कुनैबेला यस्ता प्रश्नहरू उठाए पनि उनीहरूसँग आफूलाई प्रतिरक्षा गर्ने हजारौँ बहानाहरू हुन्छन् । तर, ती कुनैमा पनि नैतिकताबोध वा आत्ममूल्यांकन भने हुँदैन । आफूबाहेक अरू सबैलाई दोष लगाएर पन्छिने गर्छन्, ती मानिसहरू जसको अयोग्य काँधमा हामीले हाम्रो समुन्नति र भविष्यको भारी टिकाएका हुन्छौँ ।
तर पनि, हामी हरेक नयाँ मान्छे, हरेक नयाँ सोच र हरेक नयाँ आश्वासनहरूमा आश्वस्त हुन्छौँ । आश्वासनले पेट भरँिदैन भन्छन् तर हामी त सधैँ आश्वासन खाएर पेट भररिहेका छौँ, आश्वासन पिएर आफ्नो तिर्खा मेटिरहेका छौँ । हामी आश्वस्त हुनुमा नै रमाउँछाँै । किनभने, आश्वस्त नहुनासाथ शंकाहरू पलाउँछन् । विकल्पहरू केलाउन थाल्यो भने नदुखेको कपालमा डोरी बाँधेजस्तो हुन्छ । हामी आफँैलाई नपरेसम्म त्यो हाम्रो समस्या होइन । तर, जब त्यो हामीलाई पर्छ, त्यतिबेला हामीसँग उपायहरू नहुन सक्छन् । माइग्रेनबाट बच्नका लागि कतै हामी आफूभित्र अर्बुदका जीवाणुहरू त पालिरहेका छैनौँ ?
यसका बाबजुद पनि हामी धन्य छौँ, महान् छौँ । सत्तालोलुपहरूलाई माथि चढ्नका लागि टेक्ने थाप्लो दिन्छौँ हामी, अनि अइय्या... पनि भन्दैनौँ । आफ्नो दायित्वबाट चुकेकाहरूलाई हामी कुनै प्रश्न पनि गर्दैनौँ । कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहले त्यो गर्न खोज्यो भने पनि आफ्नै भावी राजनीतिका लागि मात्र गरेको हुन्छ । आमजनता आफँैले त्यो गर्दैनन् अनि उनीहरूका लागि गरििदने जनताको नेता हाम्रो मुलुकले अहिलेसम्म जन्माएजस्तो देखिँदैन । दिवंगत केही नेताहरूका नाम लिएर फलानो भइदिएको भए...भनेर सोच्नु पनि उम्केको माछो मोटो भनेजस्तो मात्र हो । त्यसैले त समय फेरन्िछ, परििस्थति फेरन्िछ, शक्तिकेन्द्र र अनुहारहरू फेरन्िछन् तर न त तिनका चरत्रि फेरन्िछन्, न हाम्रो नियति ।